City of Vantaa - 20210408_karanteenijaeristys_somali_uusi
Hagista Koroonaha iyo hagista go’doominta
Haddii aad u nuglaatay feyruska korona (aad la kulantay qof qaba feyruska), waxaad halkaan ka heleysaa tilmaamo wax ku ool ah, kuwaasoo loogu talaggalay karantiilka.
1. Iska ilaali dhammaan la xiriirka dadka
Guriga ku jir, waxaa wax idin dhexmari karaan oo kaliya dadka guriga kugula nool, taasoo loola jeedo
gurigaaga marti ha ugu yeerin, tusaale ahaan. shaqaale nadaafadeed. Haddii uu guriga kuugu yimaaado qof ka mid ah shaqaalaha daryeelka guriga (kotihoitaja), u sheeg xaaladdaada kahor inta uusan kuu imaan.
ha tagin goobta shaqada (shaqada waxaad ka qaban kartaa dhinaca internetka), sidoo kale ha aadin iskuulka iyo xannaanada toonna.
ha aadin dukaanka, xarumaha ganacsiga ama suuqa weyn, maqaaxida, farmashiyaha, xafiisyada dowladda, maktabadda, tiyaatarka iyo goobaha kale ee guud ee dadku isugu yimaadaan.
ha aadin hoolka jimicsiga, jimicsi ciyaareedka (jumppa), dabaasha iyo goobaha kale ee hiwaayadda.
ha tagin masaajidka, kaniisadda, iyo goobaha kale ee la midka ah ee la isugu yimaado.
haddii aad ku leedahay ballan ku saabsan xaalad aan degdeg ahayn meel ka mid ah xarumaha caafimaadka, waqtiga ballankaas dib u dhig.
ha raacin gaadiidka guud ee dadweynaha (tareen, bas iyo diyaarad). Haddii aad u baahan tahay taksi, waxaad dalbataa tagsiga uu qofka iyo darawalka u dhexeeyo caag muraayadeedka.
Ha raacin wiishka, hana ku dhex socon goobaha dadka ka dhexeeya ee daarta aad deggan tahay, sidoo kale ha gelin sawnada dadka ka dhexeysa. Iska ilaali inaad taataabato biraha jaranjarada ku dheggan korkooda iyo meel kasta oo dadka kale ay taataaban karaan.
Xusuusnoow qaabka wanaagsan ee nadaafadda caafimaadka ee qufaca, diifsashada iyo gacmo dhiqista.
Bannaanka waad soc-socan kartaa iyadoo arrinkaas ay ku xiran tahay hadba sida uu caafimaadkaagu yahay, laakiin iska ilaali dadka kale. Dadka kaa horimaanaaya u jirso ugu yaraan 2 mitir.
2. Hagista karantiilka ee loogu talaggalay dadka u nuglaaday Cocid-19.
3. Dalbo baaritaanka korona, haddii aad isku aragto astaamaha cudurka amaba laguu diray in aad baaritaan aaddo.
Waxaad baaritaanka korona ka dalban kartaa, adigoo galaaya qaybta Koronaboti.
4. Karantiil miyaa lagu galiyay?
Waxaad xaq u yeelan kartaa lacagta gunnada cuddurka faafa.
Haddii uu kugu dhacay feyruska korona, waxaad halkaan ka heleysaa tilmaamo wax ku ool ah, kuwaasoo loogu talaggalay go’doominta.
Guriga ku jir, waxaa wax idin dhexmari karaan oo kaliya dadka guriga kugula nool, taasoo loola jeedo, gurigaaga marti ha ugu yeerin, tusaale ahaan. shaqaale nadaafadeed. Haddii uu guriga kuugu yimaaado qof ka mid ah shaqaalaha daryeelka guriga (kotihoito), u sheeg xaaladdaada kahor inta uusan kuu imaan.
ha raacin gaadiidka guud ee dadweynaha (tareen, bas iyo diyaarada). Haddii aad u baahan tahay taksi, waxaad dalbataa tagsiga uu qofka iyo darawalka u dhexeeyo caag muraayadeedka.
Ha raacin wiishka, hana ku dhex socon gooobaha dadka ka dhexeeya ee daarta aad deggan tahay, sidoo kale ha gelin sawnada dadka ka dhexeysa. Iska ilaali inaad taataabato biraha jaranjarada ku dheggan korkooda iyo meel ksata oo dadka kale ay taataaban karaan.
2. Waxaa lagaa helay feyruska korona, natiijada baaritaankana waxaa ay noqotay mid posotiif ah, waxaadna sugaysaa oo ku soo wacaaya shaqaalaha caafimaadka ee dabaggalka cudurrada faafa.
U diyaargaroow sida soo socota:
1. Ka feker, meesha aad isleedahay cudurka waad ka qaadday. Faafista cudurku waxaa ay dhacday 14-kii maalmood ee ka horraysay xanuunsashadaada.
2. Dadka aad la kulantay 48-kii saacadood ee la soo dhaafay, waxaa dhici karta in ay u nuglaadeen feyruska korona. Ka feker dadkii aad islajoogteeen gudaha muddo kabadan 15 daqiiqo
shaqada, iskuulka iyo machadka
goobta hiwaayadda, matxafka iyo shaneemada
xafladda, munaasabd kale, baarka iyo maqaaxida
masjidka, kaniisadda, ama meel kale oo la isugu yimaado oo iyaga u dhigmata
xafiisyda dowladda iyo goobaha daryeelka caafimaadka
safar aad ku tagtay dalkaagii hooyo ama dibadda
3. Haddii loo baahdo xitaa dib u eeg kaalantarkaaga, oo ka hubi rasiidka aad wax ku soo iibsatay dhammaan goobihii aad wax ka soo iibsatay.
4. Waxaad diyaarisaa liiska dadkii aad la kulantay: magaca, telefoon nambarka iyo magaalada uu deggan yahay. Dadka aad noo soo gudbisay liiskooda uma sheegeyno adiga magacaaga. Haddii aad adigu doonayso, iskaa ayaad ugu sheegi kartaa iyaga, suurtagalnimada ah in ay u nuglaadeen feyruska korona.